IOSFonts.com, iwebhusayithi edibanisa iifonti yokubhaliweyo esetyenziswe kwi-iOS | IPhone iindaba
IOSFonts.com, iwebhusayithi edibanisa iifonti yokubhaliweyo esetyenziswe kwi-iOS
Iifonti ze-iOS liphepha lewebhu elidibanisa zonke iifonti ezikhoyo kwi-iOS iminyaka eliqela. Yintoni enokuba luncedo kwiwebhusayithi enje? Ukuba uyilo, uyakuqonda ukubaluleka kokwazi iifonti ezikhoyo kwizixhobo zeApple ukuze uyile iwebhusayithi okanye usetyenziso.
Iwebhusayithi yemigca ye-iOS ikwasivumela ukuba sikhangele ifonti ethile ngenjini yokukhangela ehlanganisiweyo okanye jonga kwangaphambili indlela ibinzana okanye igama elijongeka ngayo esinokubhala ngesandla. Zonke ezi zikhetho ziyafikeleleka kwi-iPhone, ujongano lwewebhu luhlengahlengiswe kwifowuni yeApple.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuzisele ifayile yeFotohop edibanise izinto ezininzi ze-interface entsha ye-iOS 7. Ukuba sidibanisa zombini izixhobo, unokwenza iwebhu okanye usetyenziso idityaniswa ngaphandle komthungo kunye nobuhle benkqubo yokusebenza ka-Apple.
Ukuba awuyilo uyilo, unokuthatha ukhenketho lwe Iifonti zewebhu iwebhusayithi kwi phonononga imithombo eyahlukeneyo phaya, Mhlawumbi baya kukunceda xa ubhala uxwebhu okanye ukusetyenziswa ngakumbi ekhaya.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ngoku unokukhuphela ujongano lwe-iOS 7 kwifomathi yePSD
Imvelaphi Inkcubeko yeMac
Ikhonkco - Iifonti ze-iOS
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » IOSFonts.com, iwebhusayithi edibanisa iifonti yokubhaliweyo esetyenziswe kwi-iOS
Lumu, enye imitha yokukhanya ye-iPhone
Ukungqubana kwezindlu kuhlaziywa ngezinto ezininzi ezintsha